အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာလေကြောင့် လည်ချောင်းနာ၊ အအေးမိနိုင်သလား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ အချိန်ကြာကြာနေမိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ပန်ကာလေကို အချိန်ကြာကြာခံပြီးရင် လည်ချောင်တွေယားပြီး နာလာတာ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးတာ၊ နုံးတာတွေကို လူတိုင်းနီးပါး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ လူတော်တော်များများကတော့ ဒါကို အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာကလာတဲ့လေကြောင့် အအေးမိတာလို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ဘဲ Air Conditioning Sickness လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ပါ။
>> Air Conditioning Sickness ဆိုတာ ဘာလဲ?
အဲယားကွန်း (သို့) ပန်ကာကလာတဲ့ လေအေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါ ဒီရောဂါပိုးမွှားတွေကြောင့် အအေးမိတာကို Air Conditioning Sickness လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Air conditioning sickness ကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအချက် (၃) ချက်ရှိပါတယ်။
● အိမ်ခန်း၊ ရုံးခန်းတွေကို နေ့စဉ်ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးမလုပ်တဲ့အခါ နံရံနဲ့ကြမ်းပြင်တွေ ချောင်ကျပြီး စိုထိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုတွေ ပေါက်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာ ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို လေထုထဲပျံ့နှံ့စေသလို ဖြစ်သွားတာကြောင့် ရှူရှိုက်မိတဲ့အခါ လည်ချောင်းနာတာ၊ နှာစေးတာတွေ ဖြစ်လာရတာပါ။
Degirol IA 1
● အဲယားကွန်းနဲ့ ပန်ကာတွေကို သေချာသန့်ရှင်းရေး မလုပ်၊ ကောင်းကောင်း မထိန်းသိမ်းတဲ့အခါ ရောဂါပိုးတွေ ပေါက်ပွားဖို့အတွက် နေရာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲယားကွန်းတွေကို ပုံမှန် Maintenance မလုပ်ရင် စိုထိုင်းဆများပြီး ဘက်တီးရီးယားနဲ့မှိုတွေ ပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်။
● နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာကို အအေးဆုံးအခြေအနေမှာထားပြီး ဖွင့်ထားတာပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်က အေးပြီးခြောက်သွေ့တဲ့အခါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ ကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်သလို၊ သွေးကြောတွေကျဉ်းပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းတာကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုလည်း ကောင်းကောင်း မတိုက်ထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လေထုခြောက်သွေ့တဲ့အခါ နှာခေါင်းအတွင်းသားနဲ့ လည်ချောင်းတွေလည်း ခြောက်သွေ့တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အစိုဓာတ်ကို ပိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ရောဂါပိုးပေါက်ပွားမှုကို အားပေးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။
ခြုံပြောရရင် Air Conditioning Sickness ကိုဖြစ်စေတဲ့ ဒီသုံးချက်လုံးဟာ ရောဂါပိုးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီး အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာလေခံတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီး ပတ်သက်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Degirol IA 2
>> Air Conditioning Sickness မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
● အိမ်ခန်း၊ ရုံးခန်းကို ပုံမှန်လေး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
● အဲယားကွန်းတွေ၊ ပန်ကာတွေကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် အဲယားကွန်းတွေကို လအနည်းကြာတိုင်း တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ပုံမှန် maintenance လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
● အဲယားကွန်း (သို့) ပန်ကာလေခံနေချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်တာ၊ နုံးတာ၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာတွေ စဖြစ်လာတာနဲ့ အဲယားကွန်း၊ ပန်ကာကိုပိတ်ပြီး အခန်းအပူချိန်မှာပဲ နေပေးပါ။
● အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ အနေများသူဆိုရင် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ ရေများများ သောက်ပေးပါ။
၁၉.၅.၂ဝ၂၂ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဓာတ်မတည့်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲက စိတ်ညစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ချောင်းခြောက်ဆိုးတတ်တာပါပဲ။ ချွဲသလိပ်မထွက်ဘဲ ချောင်းဆိုးတာကို ချောင်းခြောက်ဆိုးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အပင်ဝတ်မှုန်တွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်အညစ်အကြေးအမှုန်အမွှားတွေ၊ မှိုတွေကြောင့် ဒီလိုဓာတ်မတည့်မှုတွေကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှ...
၁၁.၅.၂ဝ၂၂ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပခုံးအဆစ် လှုပ်ရှားရခက်ရင်၊ လှုပ်လိုက်တဲ့အခါ နာကျင်နေရင် ဒါဟာ Frozen shoulder ဆိုတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပခုံးဆစ်ခဲခြင်းလို့ အလွယ်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ Frozen shoulder နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ကုသရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
>> Frozen sho...